Igumbi lokulala elihle likaEdwardian eli-2 elinendawo yokupaka
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguSeiriol
Isakhiwo sezitena esingaphambili se-Edwardian esigcina izinto zokuqala ezifana neendawo zomlilo kuwo onke amagumbi kunye ne-cornice yokuqala kwigumbi lokuhlala. Ikwanemod-cons ezifana wi fi elawulwa ukufudumeza central, TV kunye nomatshini ikofu Nespresso.
* ICOCWE NGOBUCHULE KWAYE USENKONZO PHAMBI KOKUHLALA
* Ilinen ehlanjwe ngobuchwephesha, iitawuli kunye nezinto zangasese.
Indlu igqitywe kakuhle ukuze ihambelane nesitayile sexesha lendlu kubandakanya imigangatho yamaplanga kunye neendawo zomlilo ezivulekileyo.
Kukho igumbi lokuphumla, igumbi lokutyela kunye nekhitshi elilungiselelwe ngokupheleleyo yonke into ibekwe kumgangatho ophantsi. Kumgangatho wokuqala uya kufumana amagumbi okulala amabini abanzi kunye negumbi lokuhlambela losapho elineshawa eyahlukileyo kunye nebhafu yexesha lokuma simahla.
Indlu ikwabonisa igadi ethandekayo ukuba uyonwabele ngemini yokutshona kwelanga (ngenyani ilanga liyakhanya eWales ngamanye amaxesha).
IVictoria Park ikufuphi kakhulu nevenkile ethandekayo yekofu kwindawo yangasese eguquliweyo, ebizwa ngokuba yiBloc! Kuhle ukuhlala ngaphandle apho. Ipaki kaThompson nayo ikufuphi.
Kukho indawo yokutyela egqwesileyo yepizza ebizwa ngokuba yiNook, ivenkile enkulu yentlanzi kunye neetships, indawo yokubhaka enkulu ebizwa ngokuba yiPettigrews zonke eziseCowbridge Road East ecaleni kweVictoria Park; iindawo zokutyela ezinkulu zamaIndiya kwiCowbridge Road East, ngakumbi iTaste of Wales.
Kukho i-metro ye-Tesco yemizuzu emi-5 yokuhamba kwi-Cowbridge Road East; iivenkile ezikwikona ezikufutshane kwindlela enye.
Umbuki zindwendwe ngu- Seiriol
Mna neqela lam labaphathi bezindlu siza kufumaneka 24/7 ngo-Airbnb, nge-imeyile, okanye ngomnxeba ukuze sikunike naluphi na uncedo onokulufuna ngalo lonke ixesha lokuhlala kwakho.
Idiphozithi Yokhuseleko - ukuba wenza umonakalo kwikhaya, usenokubhataliswa ukuya kutsho kwi-$265
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Cardiff